FAQs Content-Somali — Ohio Department of Job and Family Services
Waa maxay aasaasidda aabanimada?
Aabannimada waxaa loola jeedaa aabaha sharciga ah. Aasaasidda aabanimada waa habka aabbaha saxda ah u noqdo aabaha sharciga ah ee ilmihiisa haddii isaga iyo hooyadu aysan is qabin.
Waalidiinta aan is qabin, aabanimada waa in la aasaasaa ka hor inta magaca aabuhu uusan ka muuqan shahaadada dhalashada.
Sideen aabannimada ugu aasaasaa ilmahayga?
Ohio gudaheed, aabannimada waxaa loo aasaasi karaa saddex siyaabood:
Qirashada Dhaarta Aabannimada (JFS 07038): Waalidiinta ayaa buuxiya foomka sharciga ah si loogu daro magaca aabbaha saxda ah shahaadada dhalashada. Markaad saxiixdo foomka, waalidku waxay aasaasayaan aabanimada ee cunugooda - micnaheedu waa aabaha sharciga ah ee la aqoonsan yahay. Warqadda dhaarta aabbanimada waxaa lagu buuxin karaa isbitaalka wakhtiga dhalashada ama ka dib goobta diiwaangeliyaha ee deggaanka (waaxda caafimaadka) ama goobta hay'adda fulinta taageerada ilmaha (CSEA) ee gobalka hooyadu ay degan tahay. Riix halkan si aad u tagto Jaheeyaha Qariiradda Xafiiska una heshid Xafiiska CSEA-da ee habboon.
Amarka maamulka ee aabanimada (JFS 07774): Waalidiinta aan is qabin ee aan aasaasin aabanimada iyada oo loo marayo hab kale iyaga oo doonaya in ay helaan baaritaanka hidda-sidaha, hay'adda fulinta taageerada caruurta ayaa qaadi karta baaritaankaa iyo bixinta amarka aabanimada haddii dhab ahaantii uu ninka yahay aabaha saxda ah ee ilmaha. Haddii hooyadu ku nooshahay Ohio, fadlan la xiriir hay’adda fulinta taageerada ilmaha (CSEA) ee gobolka hooyadu degan tahay. Haddii hooyadu ku nooshahay meel ka baxsan Ohio, waxaad kala xiriiri kartaa CSEA-da ee gobolka aabuhu degan yahay. Riix halkan si aad u tagto Jaheeyaha Qariiradda Xafiiska una heshid Xafiiska CSEA-da ee habboon.
Amarka Maxkamada ee Aabanimada: Aabbannimada ayaa la aasaasi karaa iyadoo loo marayo Maxkamadda Caruurta iyo marmarka qaarkood iyada oo loo marayo Maxkamadda Xiriirka Qoyska (Sida qayb ka mid ah furiinka.)
+ Waa maxay foomka Qirashada Dhaarta Aabannimada (JFS 07038)?
Qirashada Dhaarta Aabbanimada waxaa loo isticmaalaa in lagu daro aabaha saxda ah shahaadada dhalashada ee ilmaha marka hooyadu aanan la qabin ee wakhtiga dhalashada ama 300 maalmood gudahood ee wakhtiga dhalashada. Waa dokumenti sharci ah, labada waalidba waa inay saxiixaan warqadda dhaarta. Buuxinta warqada dhaarta waa ikhtiyaari.
+ Warqadda Qirashada Dhaarta Aabanimada (JFS 07038) ma tahay ikhtiyaarka saxda ah ee aniga iyo ilmahayga?
Aasaasidda aabanimada waa go'aan muhiim ah. Buuxinta foomka dhaarta aabbanimada waa habka ugu dhakhsiyaha badan uguna fudud ee waalidiinta aan is qabin si ay u aasaasaan aabbo sharci ah uguna qoraan magaca aabaha shahaadada dhalashada. Aasaasidda aabanimada ayaa adiga iyo ilmahaaga siinaya xuquuqda iyo fursadaha aad u baahan tihiin oo aad u qalantaan.
Ku qorista magaciisu shahaadada dhalashada, aabbuhu wuxuu xuquuq sharci ah u helayaa ubadkiisa . Markaa ilmuhu wuxuu helayaa faa'iidooyin sida Amniga Bulshada, caymiska nolosha, faa'iidooyinka milatariga, iyo dhaxalka.
Ilmahaaga ayaa sidoo kale heli doona caymiska caafimaadka aabahood iyo sidoo kale taariikhda caafimaadka qoysaska iyo abtirsiinka.
Sida ugu muhiimsan, aasaasida aabanimada waxay u ogolaaneysaa hooyada iyo aabaha labadaba in ay sameeyaan xiriir dareen ah ee cunugooda oo ayna wadaagaan mas’uuliyadaha iyo abaalmarinta aabannimada.
Haddii aad wax shaki ah ka qabto cidda aabaha canugu yahay, ha saxeexin warqadda Qirashada Dhaarta aabbanimada. Waxaa laga yaabaa inaad rabto in lagaa qaado baaritaanka hidda-sidaha ka hor inta aadan go'aan gaarin
+ YAANAN buuxinayn warqadda dhaarta aabannimada?
Hooyada la qabo
Hooyo la furay 300 maalmood gudahood marka ilmuhu dhasho haddii aysan helin digreetada furiinka kama dambaysta ah ee sheegaya in ninka uusan ahayn aabaha ilmaha.
Hooyo sharci ahaan ka go’day ninkeeda
Waxa jira xaalado gaar ah oo ka hortagaya in shakhsiga uu isticmaalo dhaarta si loo aasaaso aabanimada. Haddii aadan hubin, la xiriir CSEA-da degaankaaga.
+ Maxay yihiin shuruudaha si loo buuxiyo dhaarta aabbanimada?
Waalidka kastaa wuxuu u baahan yahay aqoonsi sawir leh iyo Lambarka Amniga Bulshada.
Aaabaha (Taariikhda dhalashada, goobta dhalashada, meesha, heerka darajada ugu sarreeya ee uu bogay, cinwaanka, shaqada iyo caymiska), iyo sidoo kale labada waalidba: (Magaca buuxa, cinwaanka hadda, gobolka iyo degmada dhalashada, taariikhda dhalashada, iyo SSN).
Labada waalidba waa inay saxeexaan warqadda dhaarta iyaga oo jooga nootayada dadwaynaha iyaga oo haystaan warqadda dhaarta oo nootaayaysan, laakiin maahan inay saxeexaan isla wakhti isku mid ah.
Nootaayadu waxaa si bilaash ah looga bixiyaa isbitaalada, diiwaangeliyeyaasha maxalliga ah iyo CSEAs.
+ Maxay yihiin tilmaamaha ku saabsan nooca aqoonsiga ee la aqbali karo ee dhaarta aabbanimada?
Si loo dhamaystiro nidaamka, waalid kasta waa inuu muujiyaa aqoonsi sawir leh oo ay dowlad bixisay. Noocyada aqoonsiyada la aqbalo waxaa ka mid ah:
Kaarka aqoonsiga gobolka (oo laga heli karo Xafiisyada Gaadiidka Gawaarida oo lagu heli karo lacag yar)
Kaarka Aqoonsiga ee Qunsulka ama ay bixisay dawlad kale, aqoonsi ansax ah oo ka soo jeeda waddanka asalka ah (waa in lagu liistagareeyaa Haggaha Aqoonsiga Caalamiga ah si loo aqbalo haddii uu ka yimid waddan kale)
+ Immisa ayaa ku kacaysaa dhamaystirka dhaarta aabbanimada?
Wax lacag ah lagama qaadayo si loo dhammaystiro Qirashada Dhaarta Aabanimada.
+ Maxaa dhacaya haddii aabuhu uusan saxiixin dhaarta aabbanimada?
Isbitaalka dhexdiisa, waalidiinta aan is qabin waxay dhamaystiri karaan oo ay saxiixi karaan warqadda dhaarta si ay u aasaasaan aabannimada cunuga oo u dhashay hooyo aan la qabin. Haddii labada waalid aysan saxiixin warqada dhaarta, magaca aabbuhu ma geli doono shahaadada dhalashada, sidoo kale ilmuhuna ma lahaanayo aabbo sharci ah wakhtigaas. Maadaamaa warqadda dhaarta ay tahay in ay saxiixaan labada waalid ee saxda ah, haddi midkoodna doorto inuusan saxiixin, aabanimadu laguma aasaasi karo habkan. Si kastaba ha noqotee, waalidku waxay dooran karaan inay aasaasaan aaannimada wakhti dambe.
+ Maxaa dhacaya haddii aabuhu ka baxsan yahay gobolka uusan awoodin inuu saxiixo dhaarta aabbanimada. Ma u diri karaa isaga?
Haa. Marka uu dhameeyo qaybtiisa ee saxiixiisu la nootaayeeyo, wuxuu si toos ah ugu diri karaa warqadda dhaarta Waaxda Dhexe ee Diiwaangelinta aabannimada. Cinwaanka boostada ayaa ka muuqanaya warqadda dhaarta oo waafaqsan"Ogaysiiska Xuquuqda iyo Mas'uuliyadaha iyo Ilaalinta nidaamka mudnaanta leh". Warqadda dhaarta waa in lagu soo diraa toban (10) maalmood gudahood ee saxiixa ugu danbeeya.
+ Qofka aan deganayn U.S. ma saxiixi karaa warqadda dhaarta aabannimada?
Haa, haddii uu ilmuhu ku dhashay Ohio, ama mid ama labada waalidba ay ku nool yihiin Ohio. Iyadoo aan loo eegin muwaadinnimada waalidka, waxay u aasaasi karaan aabanimada cunugooda, kaasoo ah muwaadin Maraykan ah haddii dukumiintiyada oo idil loo baahan yahay iyo aqoonsi haboon la bixiyo. Foomkan looma isticmaalo in raad-raac lagu sameeyo dadka aan ahayn U.S.
+ Sidee saxiixa dhaarta aabannimada u saamaynaysaa haynta iyo booqashada?
Aasaasidda aabbanimada iyo haynta waa labo arrimood oo kala duwan. Sida waafaqsan Xeerka Ohio ee Dib loo Eegay, haddii ilmuhu u dhasho hooyo aan guursan, hooyadu waa waalid keli ah oo oo ah mas'uulka sharciga ah ee ilmaha ilaa amar maxkamadeed laga soo saaro. Marka aabbanimada la aasaaso, aabuhu wuxuu dalban karaa booqashada ama xuquuqda hayynta iyada oo loo marayo nidaamka maxkamadda.
+ Aabaha ma laga rabaa inuu bixiyo masruufka caruurta haddii uu saxiixo dhaarta aabbanimada?
Maya. Aabaha isla markaaba laguma amro inuu bixiyo masruufka caruurta. Xaaladaha badankood, waxay noqon doontaa mas'uulka cunuga in uu codsado taageero. Si kastaba ha noqotee, haddii aad qaadato manfacyada qaarkood, aabaha waxaa looga baahan karaa inuu bixiyo masruufka caruurta. Haddii aad qabtid su'aalo gaar ah oo ku saabsan xaaladdaada, fadlan la xiriir hay’adda fulinta taageerada ilmaha ee deegaankaaga.
+ Waalidiinta yar yar ma saxiixi karaan dhaarta aabbanimada?
Waalidiinta yar yar waxay saxiixi karaan foomka Dhaarta Aabbanimada. Ma jiraan shuruudo dheeraad ah oo loogu talagalay waalidiinta yaryar.
+ Maxaa dhacaya haddii waalidiintu beddelaan fikirkooda mar danbe?
Qof kasta oo saxiixay warqadda Dhaarta Aabannimada (JFS 07038) ayaa laga yaabaa inuu keeno tallaabo lagu hakin karo 60 maalmood gudahood ee saxiixii ugu dambeeyay ku qoran warqadda dhaarta. Hay'adda fulinta taageerada ilmaha ayaa hannaankani ka caawin karta halka ilmaha ama mas'uulka ama qofka hayo ilmaha ee sharciga ah uu ku nool yahay. Waxay ku lug leedahay buuxinta foomka hakinta, iska diiwaangelinta baaritaanka hidda-sidaha, iyo dhammaystiridda baaritaanka hidda-sidaha. CSEA-da ayaa waxay soo saari doontaa amarka aabanimada iyada oo ku saleysan natiijooyinka.
Ka dib 60 maalmood gudahood, habka keliya ee lagu hakiyo dhaarta waa in la keeno tallaabo maxkamadeed si loo hakiyo ee1 sano gudahood ka dib marka ay noqoto mid kama dambeys ah. Qofka loo maleynayo inuu yahay aabaha ilmaha sida uu dhigayo sharciga Ohio oo aan saxiixin qirasho, qofkii saxiixay qirashada, ama mas'uulka ama ilaaliyaha sharciga ah ee ilmaha ayaa laga yaabaa inay keenaan tallaabo lagu hakinayo dhaarta iyadoo ku salaysan khiyaanada,hanjabaad , ama caddeyn xaqiiq ah oo khaldan.
Su’aalaha Soo-noqnoqda ee Dhaarta Aabannimada
+ Ma hubno inuu yahay aabaha, laakiin wuxuu rabaa inuu ku qornaado shahaadada dhalashada. Maxaan sameynaa?
Haddii waalid midkood aanu hubin in ninku yahay aabaha ilmaha, waa inay tixgeliyaan raadista baaritaanka hidda-sidaha. Foomka Qirashada Dhaarta Aabbanimada (JFS 07038) waa in aan la isticmaalin haddii waalidka labaduba hubiyaan in ninka ku qoran foomka uu yahay aabaha saxda ah.
+ Habka loo qaado baaritaanka Hidda-sidaha?
Hidda-sidaha, ama baaritaanka DNA-ga, waxaa lagu maamulaa uruurinta sanbalka waxaana loo diraa shaybaarka si loo barbardhigo macluumaadka laga soo qaaday sambalka ilmaha oo leh sifooyin isku mid ah ee sambalka ninka iyo hooyada.
+ Muxuu baaritaanka hidda-sidaha ku tusayaa?
Baaritaanku wuxuu muujinayaa 99.9% hubaal ah in ninku yahay aabbaha saxda ah ee cunugga. Waxay kaloo muujin kartaa haddii ninku aanu ahayn aabbaha saxda ah ee ilmaha
+ Baaritaanku ma xanuun baa?
Maya ma ahan. Xaaladaha badankood, suufka xoqidda canka ayaa laga qaadaa hooyada, ilmaha iyo aabbaha eedeysan. Suufka wuxuu ka kooban yahay xoqidda jilicsan ee gudaha canka dhinac kasta oo qaadata wax ka yar hal daqiiqo.
+ Ilaa imisaa jir ayuu ilmahaygu u baahan yahay si loo qaado baaritaanka Hidda-sidaha?
Baariaanka hidda-sidaha waxaa lagu samayn karaa carruurta da'doodu yar tahay sida kuwa markaa dhashay iyada oo la adeegsanayo baaritaanka xoqidda canak ee suufka ah, taas oo sambal ka soo qaadda gudaha canka beddelkii laga qaadi lahaa dhiigga.
+ Haddii baaritaanka hidda-sidaha uu muujiyo in 99% ay dhici karto in ninka yahay aabaha saxda ah, ninku miyuu noqon karaa aabe iyada oo aan maxkamad la aadin?
Haa, haddii baaritaanka lagu sameeyay meel ka baxsan maxkamadda /CSEA-da. Haddii baaritaanka ay qaaday CSEA-da, markaa CSEA-da ayaa waxay soo saari doontaa amar maamul oo go'aamiya jiritaanka aabbaha iyo xidhiidhka ilmaha.
+ Yaa mas'uul ka ah khidmadda baaritaanka hidda-sidaha?
Marka hay'adda fulinta taageerada ilmaha (CSEA) ay aasaasayso aabanimada, walxaha hidd-sidaha (dhiigga ama unugyada canka) ayaa guud ahaan lagu qaadaa goobta CSEA-da. CSEA ayaa waxay bixisaa khidmadda baaritaanka marka hore, laakiin waxay codsan kartaa in aabaha uu dib ugu soo celiyo CSEA-da lacagta baaritaanka mar dambe. Kharashka baaritaankani waa mid aan qaali ahayn. Waa inaad tan kala hadashaa CSEA-da.
+ Halkee baan u aadi karaa baaritaanka hidda-sidaha ama DNA-da?
Waalidiinta aan is qabin waxay heli karaan baaritaanka hidda-sidaha iyada oo loo marayo hay'adda fulinta taageerada ilmaha (CSEA) ee deegaanka. Waalidiintu waa inay ku codsadaan baaritaanka goobta degmada ee ay hooyadu degan tahay. Riix Halkan si aad u hesho CSE-da ee degmada hooyada. Kadib marka la helo natiijooyinka baaritaanka hidda-sidaha, CSEA-da ayaa waxay soo saari doontaa amar ah aasaasidda aabannimada ama inaan la aasaasin aabanimada. CSEA-da waxay sidoo kale soo gudbin kartaa waraaqo si ay si habboon ugu beddesho shahaadada dhalashada ee ilmaha.
+ Aabaha oo jooga meel ka baxan gobolka. Sidee baan u heli karnaa baaritaanka hidda-sidaha?
Hooyadu waxay la xiriiri kartaa hay'adda fulinta taageerada ilmaha (CSEA) ee gobolkeeda si looga caawiyo helitaanka baaritaanka hidda-sidaha marka aabbuhu ku nool yahay meel ka baxsan gobolka.
Su’aalaha Soo-noqnoqda ee Baaritaanka hidda-sidaha
+ Sideen u helayaa shahaadada dhalashada? Meeqa ayaa ku kacaysa shahaadada dhalashada?
Shahaadada Dhalashada waxaa laga dalban karaa Bureau of Vital Statistics iyada oo loo marayo online-ka, boostada, ama qof ahaan. Riix Halkan si aad u dalbatid una heshid faahfaahinta kharashka.
+ Waxaan rabnaa inaan bedelno magaca ilmaha. Sideen u sameyn karnaa?
Haddii waalidiintu ay aasaasayaan aabannimada iyada oo la adeegsanayo Qirashada Dhaarta Aabanimada (JFS 07038), waxay bedeli karaan magaca ilmaha ee ku qoran warqadda Dhaarta (Affidavit). Magaca asalka ah ee cunuga waa in lagu qoraa xariiqda koowaad ee warqadda Dhaarta , iyo "Haa" waa in lagu calaamadeeyaa su'aasha agteeda "Haddii shahaadada dhalashada ee ilmaha horeyba loo xareeyay, hadda ma waxaad rabtaa inaad bedesho magaca ilmaha? " Magaca cusub ee ilmaha waa in lagu qoraa meesha ay ku weydiineyso "Haddii" HAA ", ku qor magaca ilmaha cusub." (Fadlan ogow: Foomkan waxaa loo isticmaali karaa oo kaliya haddii waalidiintu aysan horey u aasaasin aabanimo iyada oo loo marayo habab kasta.) Haddii waalidiintu ay hore u aasaaseen aabbanimada, waxay u baahan yihiin inay sameeyaan kuwan soo socda:
Haddii waalidku horay u buuxiyay dhaarta aabbanimada oo hadda ay doonayaan inay beddelaan magaca ilmaha, waxay tagi karaan maxkamad rafcaan ah si ay u raadshaan isbedel magac sharci ah.
Haddii waalidku uu aasaasay aabbanimada iyada oo la adeegsanayo CSEA-da ee baaritaanka hidda-sidaha, waxay dib ugu laaban karaan CSEA-da waxayna waydiisan karaan shaqaalahooda kiiska inay buuxiyaan ayna saxiixaan Amar Maamul ah si loo Bedelo foomka Diiwaanka Dhalashada (JFS 07723), oo loo dirayo Waaxda Diiwaangelinta Dhexe ee Aaabannimada.
Haddii waalidku ay ku aasaaseen aabbanimada maxkamadda, waxay ku noqon karaan maxkamada iyagoo codsanaya in la diro Go'aanka Aabanimada (HEA 3029) ee buuxsan lana saxiixay.
Su’aalaha Soo-noqnoqda ee Shahaadada Dhalashada
+ Aabaha ayaa xannaaneynaya cunugga laakiin si sharci ahaan looma asaasin aabbaha. Hooyo lama heli karo si ay u saxeexdo Qirashada Dhaarta Aabannimada (JFS 07038). Sidee buu u aasaasi karaa aabbanimada?
Qoraalka dhaartu waa foom ikhtiyaari ah oo ay buuxiyaan labada waalid ee saxda ah. Haddii waalidiinta midkood aan la heli karin ama uu doonayo inuu saxeexo warqada dhaarta, waalidka kale wuxuu raadin karaa aasaasidda aabannimada iyada oo loo marayo baaritaanka hidda-sidaha ee hay'adda fulinta taageerada ilmaha (CSEA) ama maxkamadda.
+ Aabaha waa dhintay. Sideen u xaqiijin karaa inuu yahay aabaha?
Waxaad la xiriiri kartaa CSEA-da degaankaaga si aad u ogaato haddii ay ku caawin karaan. Waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad arrintan dabagal ku samaysid iyadoo loo marayo maxkamad. Riix Halkan si aad u hesho CSEA-da ee gobolkaaga.
+ Waa la i furayaa. Ninkayguna ma aha aabaha cunugayga, marka waa maxay sababta isbitaalku uu ii oranayo waa in aan ku qoraa magaciisa shahaadada dhalashada? Aabaha saxda ah waakan wuxuuna doonayaa in lagu qoro shahaadada dhalashada
Ohio gudaheeda, haddii qof dumar ah la guursado xilliga dhalmada ama wakhti kasta 300 oo cisho ka hor dhalmada, ninku waxaa loo arkaa inuu yahay aabbaha sharciga ah ee ilmaha. Isbitaalka waxaa laga yaabaa inaynan ku qorin magaca saxda ee "aabaha" shahaadada dhalashada.
Si kastaba ha noqotee, haddii hooyadu la furo iyadoo uur leh, markaana digreetada furitaanka ay sheegayso in ninku uusan ahayn aabaha ilmaha, hooyadu waa in ay isbitaalka siisaa nuqul ka mid ah digreetada furiinka wakhtiga dhalashada ilmaheeda. Hooyada iyo aabbaha saxda ah ayaa markaa kadib ku aasaasi karaa Qirashada Dhaarta Aabbanimada goobta isbitaalka haddii ay rabaan.
Su’aalaha Soo-noqnoqda ee Xaaladaha Gaarka ah